“Mission de playdoyer” avy any Maputo: Nampahafantatra ireo Loholona ny tokony handaniana ny “ratification du protocole de Maputo”. – Sénat de Madagascar
“Mission de playdoyer” avy any Maputo: Nampahafantatra ireo Loholona ny tokony handaniana ny “ratification du protocole de Maputo”.
December 19, 2019 RAMBELO Abel NIRINA
Nihaona tamin’ireo Loholona mpikambana ao amin’ny vaomieran’ny sosialy, ny koltoraly ary ny fifandraisana, ary koa ireo Loholona vehivavy, ireo delegasiona avy amin’ny “Mission de playdoyer” avy any Maputo, delegasiona izay notarihin-dRtoa KAYITESI Jeanne Flora, androany Alarobia 18 desambra 2019, teto amin’ny Lapan’Anosikely.
Zava-dehibe tokoa izao fitsidihana izao hoy i Rtoa KAYITESI Jeanne Flora noho ny maha zava-dehibe ny fanomezan-danja ny zon’ny vehivavy maneran-tany.
Nambaran’izy ireo ihany koa fa tonga hampahafantatra ireo Loholona ireo foto-kevitra manan-danja izay tokony handaniana ilay “ratification du protocole de Maputo” izy ireo. Nambarany fa i Madagasikara dia mbola tsy nanao Sonia izany “ratification” izany ka naka ny hevitr’ireo Loholona izy ireo no sady nangataka fiaraha-miasa ahafahana mandany izany amin’ny taona 2020.
Tao aorian’ny fihaonana moa dia nanambara ny Loholona RAKOTOZAFY Martin Filohan’ny vaomieran’ny sosialy, ny koltoraly ary ny fifandraisana eto amin’ny Antenimierandoholona , fa zava-dehibe ny nahatongavan’ity delegasiona ity teto amin’ny Antenimierandoholona satria nahafahana niresaka sy nifanakalo hevitra , ny tanjon’izy ireo moa dia ny mba hankatoavan’i Madagasikara ity “ratification “ mikasika ny zon’ny vehivavy ity.
« Fitsidihana nataon’ny Ambasadaoron’i Inde teto amin’ny Antenimierandoholona.
ANTENIMIERANDOHOLONA: Nizara Vary, menaka, ary Gisa, ho fiatrehana ny fetin’ny Noely »